Septor Linux 2020.1 tonga miaraka amin'i Kernel 5.4, Plasma 5.14.5, fanavaozana ary maro hafa | Avy amin'ny Linux
Septor Linux 2020.1 tonga miaraka amin'i Kernel 5.4, Plasma 5.14.5, fanavaozana ary maro hafa
Andro vitsy lasa izay Ireo mpandraharaha Septor Linux dia nanambara ny famoahana ilay kinova vaovao ny amin'ny fizarana, izay ahatongavany amin'ny dikan-teny "Septor Linux 2020.1”. Ho an'ireo tsy zatra Septor Linux dia tokony ho fantatrao izany dia fizarana Linux izay manome ho an'ny mpampiasa tontolo iainana informatika efa voalamina mialoha hijerena an-tsokosoko Internet.
Miorina amin'ny sampana "Fitsapana" an'i Debian ary mampiasa Privoxy, proxy hanatsarana ny fiainanao manokana, miaraka amin'ny tambajotra tsy mitonona anarana Tor hanovana ny angon-drakitra pejy web sy lohateny HTTP alohan'ny handehanan'ny mpizaha ny pejy.
Ny fizarana Septor mampiasa KDE Plasma toy ny tontolon'ny birao ankafiziny ary misy koa launcher hampiato ny navigateur Tor farany, ary koa ny OnionShare ho an'ny fizarana rakitra tsy fantatra anarana ary Ricochet ho an'ny hafatra tsy mitonona anarana.
Amin'ity tranga ity dia nampiasaina i Debian (Buster) ho fototry ny rafitra fiasa ao amin'ny kinikany mbola eo an-dàlam-pamolavolana, miaraka amina tontolo iainana KDE.
Ny fizarana dia azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny maody mivantana, miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovana USB na azo apetraka kilasika amin'ny kapila mafy.
Ho sarotra be ny mividy Septor amin'ny Tails, Kodachi Linux na fizarana hafa miaraka amin'ny fomba mitovy amin'izany. Satria samy manome ny heviny avy ny tsirairay amin'ireny.
1 Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Septor Linux 2020.1
2 Ampidino Septor Linux 2020.1
Fampisehoana vaovao lehibe an'ny Septor Linux 2020.1
Ity kinova vaovao an'ny ny fizarana dia misy fanavaozana isan-karazany amin'ireo fonosana mandrafitra ny rafitra, ny sasany amin'izy ireo dia miavaka, toy ny tranga ao am-pon'ny rafitra izay havaozina ho amin'ny kinova 5.4 an'ny Linux Kernel.
Miaraka amin'ny fampidirana an'ity kinova Kernel vaovao ity tombony fizarana amin'ny zavatra maro ankoatry ny fananana fanohanana maoderina lehibe kokoa, satria manana ny fanohanana andrana amin'ny mpamily exFAT misokatra novolavolain'i Samsung.
Tombontsoa iray hafa dia ilay fampiasa Lockdown vaovao izay mikendry ny hanamafisana bebe kokoa ny fiarovana Linux amin'ny alàlan'ny famerana ny fidirana amin'ireo fiasan'ny kernel izay ahafahan'ny kaody tsy misy fetra mihazakazaka mamaky kaody atolotry ny fizotran'ny mpampiasa.
Ankoatra izany, miavaka koa ao amin'ity kinova vaovao an'ny Septor Linux 2020.1 ity, ny fampidirana ny KDE Plasma kinova 5.14.5, izay misy fanitsiana bibikely isan-karazany ao amin'ny Discover, addons, add-on VPN, ary koa Rafitra KDE 5.54.0 sy ny rafitra Qt 5.11.3.
Zava-baovao iray hafa amin'ity kinova ity ny Tor Browser 9.0.5 dia tafiditra izay miorina amin'ny tranokala ESR Mozilla Firefox 68.5.0 ary ny mpanjifan'ny mailaka Thunderbird 68.4.1.
Raha ny vaovao, ity kinova ity dia miaraka amin'ny Kup Backup System, fampitaovana KDE hametahana ireo rakitrao manan-danja amin'ny kapila ivelany. Kup dia manohana fomba fandrindrana roa, ny iray izay mitazona ny rafitranao hifandrindra amin'ny fotoana rehetra, ary ny iray mitazona ny famerenana taloha amin'ny fampirimana iray ihany.
Amin'ireo fonosana hafa izay nahazo fanavaozana dia:
Ampidino Septor Linux 2020.1
Farany ho an'ireo izay liana amin'ity kinova vaovao an'ny Septor Linux, Azon'izy ireo atao ny mahazo ny sarin'ny rafitra hametrahana azy amin'ny solo-sainanao na raha sanatria ka tianao ny hitsapana azy io eo ambanin'ny masinina virtoaly.
Mila mankany amin'ny tranonkala ofisialin'ny fizarana fotsiny ianao ary amin'ny fizarana fampidinana azy dia azonao atao ny mahazo ny sarin'ilay rafitra. Ny rohy dia ity.
Azonao atao ny manangona ny sary alaina amin'ny fitaovana USB miaraka amin'ny fanampian'ny fampiharana Etcher.
Septor Linux dia zaraina ho sary Live DVD ISO tokana Izy io dia mirakitra fonosana haingo ho an'ny mari-trano 64-bit ihany (x86_64) ary mety hodorana amin'ny kapila USB 2GB na lehibe kokoa ary koa DVD.
Raha olom-baovao amin'ny Linux ianao ary ampirisihina hamaky ny fizotran'ny fametrahana dia azoko lazaina aminao fa tsotra izany ary maharitra 10 minitra.
Ny interface graphique an'ny fizotry ny fametrahana dia tsy mandeha amin'ny teny anglisy, izay efa azo ovaina amin'ny dingana voalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Septor Linux 2020.1 tonga miaraka amin'i Kernel 5.4, Plasma 5.14.5, fanavaozana ary maro hafa
Q4OS 4.0 Gemini izao dia vonona ny hizaha toetra ary Q4OS 3.10 Centaurus efa miorina amin'ny Raspberry Pi
Freespire 6.0 Tonga amin'ny Linux Kernel 5.3.0-28, Mate 1.20 ary bebe kokoa